?သှားဆေးခနျးမှာသှားသနျ့ရှငျးရေးလုပျလိုကျရငျ ဘာတှထေူးခွားသှားမှာလဲ ? | OnDoctor
Home သှားနှငျ့ ခံတှငျး ကနျြးမာရေး
?သှားဆေးခနျးမှာသှားသနျ့ရှငျးရေးလုပျလိုကျရငျ ဘာတှထေူးခွားသှားမှာလဲ ?
in သှားနှငျ့ ခံတှငျး ကနျြးမာရေး
?ဆေးခန်းမှာသွားသန့်ရှင်းရေး လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ ?
?အိမ်မှာသွားပုံမှန်တိုက်နေတာကရော သွားသန့်ရှင်းရေးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလား ?
?သွားဆေးခန်းမှာသွားသန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ရင် ဘာတွေထူးခြားသွားမှာလဲ ?
?ဆေးခန်းမှာသွားသန့်ရှင်းရေး (Scaling) လုပ်တယ်ဆိုတာက ပုံမှန်သွားတိုက်သလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး ။
?သွားသန့်ရှင်းရေးလုပ်တာကို သွားကျောက်ခြစ် ၊ သွားချေးချွတ်တယ်လို့အများစုသိထားကြပါတယ် ။
?သွားသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သွားချေး ၊သွားကျောက်တွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ ခံတွင်းနံ့မကောင်းခြင်း ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ် ။
?သွားမျက်နှာပြင်က အစွန်းထင်းတွေ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လျော့နည်းသွားမယ် ။
?သွားဖုံး သွေးထွက်ခြင်း ၊ရောင်ခြင်းတွေ မရှိနိုင်တော့ပါဘူး ။
?သွားတွေအချောင်းလိုက်ကျွတ်ထွက်တဲ့ ရေစီးကမ်းပြိုရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ။
?သွားဆေးခန်းကိုလာတဲ့အတွက် အခြားခံတွင်းပြသနာတွေကိုပါ သိနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။
??အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု ရရှိလာမှာပါ ။??
?၆လ၁ကြိမ်ပုံမှန်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့သွားသန့်ရှင်းရေး (scaling) ?
?သွားသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလားဆိုတာကို သင့်ရဲ့အောက်ဖက်ရှေ့သွားတွေရဲ့အတွင်းဖက်မျက်နှာပြင်ကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့အကြမ်းမျဉ်းသိနိုင်တယ်ဗျ ။ သွားချေးကျောက်လို့ခေါ်တဲ့ Calculus တွေအဖြစ်နိုင်ဆုံးနေရာက အဲဒီနေရာဖြစ်ပါတယ် ။
?Calculus တွေက ခံတွင်းနံ့တွေမကောင်း ၊ သွားဖုံးတွေရောင်လာတဲ့အပြင် ကြည့်ရလည်းဆိုးပါတယ် ။ Calculus တွေခံတွင်းထဲမှာရှိနေတာကြာလာရင် ရေစီးကမ်းပြိုရောဂါဖြစ်ဖို့လည်း ရာခိုင်နှုန်းအရများလာမှာပါ ။
?တံတွေးထဲမှာပါတဲ့သတ္တုဓာတ်တွေနဲ့ ခံတွင်းထဲကဘက်တီးရီးယားတွေပေါင်းစုပြီး သွားချေးကျောက်(Calculus) ဖြစ်လာစေပါတယ် ။ စနစ်တကျသွားမတိုက်တတ်တာက Calculus ဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီး ဆေးလိပ်သောက်ကွမ်းစားခြင်း ၊ စိတ်ဖိစီးမှု ၊ သွားထပ် သွားမညီမညာဖြစ်နေခြင်း ၊ စိတ်ကျရောဂါနဲ့ သွေးတိုးရောဂါတို့ကြောင့် ခံတွင်းထဲမှာတံတွေးထွက်နည်းသွားတဲ့သူတွေမှာ အဖြစ်များလေ့ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျ ။
?စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပေမယ့် သွားဖုံးရောင်ရမ်းခြင်းက နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်း ၊ လေဖြတ်ခြင်း ၊ ဆီးချို ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြသနာ နဲ့ လမစေ့ပဲကလေးမွေးဖွားခြင်းတွေနဲ့ ဆပ်စပ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။
?သွားသန့်ရှင်းရေး (scaling) ကို ultrasonic scaling device တွေနဲ့ပြုလုပ်ပေးပြီးကုသချိန်အနေနဲ့လည်း အချိန်အများကြီးမပေးရပါဘူး ။
?ဆေးခနျးမှာသှားသနျ့ရှငျးရေး လုပျတယျဆိုတာဘာလဲ ?
?အိမျမှာသှားပုံမှနျတိုကျနတောကရော သှားသနျ့ရှငျးရေးလုပျတာမဟုတျဘူးလား ?
?ဆေးခနျးမှာသှားသနျ့ရှငျးရေး (Scaling) လုပျတယျဆိုတာက ပုံမှနျသှားတိုကျသလိုမြိုးမဟုတျပါဘူး ။
?သှားသနျ့ရှငျးရေးလုပျတာကို သှားကြောကျခွဈ ၊ သှားခြေးခြှတျတယျလို့အမြားစုသိထားကွပါတယျ ။
?သှားသနျ့ရှငျးရေးလုပျခွငျးအားဖွငျ့ သှားခြေး ၊သှားကြောကျတှကွေောငျ့ဖွဈရတဲ့ ခံတှငျးနံ့မကောငျးခွငျး ပြောကျကငျးသှားပါလိမျ့မယျ ။
?သှားမကျြနှာပွငျက အစှနျးထငျးတှေ အတိုငျးအတာတဈခုအထိ လြော့နညျးသှားမယျ ။
?သှားဖုံး သှေးထှကျခွငျး ၊ရောငျခွငျးတှေ မရှိနိုငျတော့ပါဘူး ။
?သှားတှအေခြောငျးလိုကျကြှတျထှကျတဲ့ ရစေီးကမျးပွိုရောဂါတှကေို ကာကှယျပွီးသားဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ ။
?သှားဆေးခနျးကိုလာတဲ့အတှကျ အခွားခံတှငျးပွသနာတှကေိုပါ သိနိုငျပါလိမျ့မယျ ။
??အရေးကွီးဆုံးအခကျြဖွဈတဲ့ မိမိကိုယျကိုယုံကွညျမှု ရရှိလာမှာပါ ။??
?၆လ၁ကွိမျပုံမှနျလုပျပေးဖို့လိုအပျတဲ့သှားသနျ့ရှငျးရေး (scaling) ?
?သှားသနျ့ရှငျးရေးလုပျဖို့လိုအပျနပွေီလားဆိုတာကို သငျ့ရဲ့အောကျဖကျရှသှေ့ားတှရေဲ့အတှငျးဖကျမကျြနှာပွငျကို ကွညျ့လိုကျတာနဲ့အကွမျးမဉျြးသိနိုငျတယျဗြ ။ သှားခြေးကြောကျလို့ချေါတဲ့ Calculus တှအေဖွဈနိုငျဆုံးနရောက အဲဒီနရောဖွဈပါတယျ ။
?Calculus တှကေ ခံတှငျးနံ့တှမေကောငျး ၊ သှားဖုံးတှရေောငျလာတဲ့အပွငျ ကွညျ့ရလညျးဆိုးပါတယျ ။ Calculus တှခေံတှငျးထဲမှာရှိနတောကွာလာရငျ ရစေီးကမျးပွိုရောဂါဖွဈဖို့လညျး ရာခိုငျနှုနျးအရမြားလာမှာပါ ။
?တံတှေးထဲမှာပါတဲ့သတ်တုဓာတျတှနေဲ့ ခံတှငျးထဲကဘကျတီးရီးယားတှပေေါငျးစုပွီး သှားခြေးကြောကျ(Calculus) ဖွဈလာစပေါတယျ ။ စနဈတကသြှားမတိုကျတတျတာက Calculus ဖွဈရတဲ့အဓိကအကွောငျးရငျးဖွဈပွီး ဆေးလိပျသောကျကှမျးစားခွငျး ၊ စိတျဖိစီးမှု ၊ သှားထပျ သှားမညီမညာဖွဈနခွေငျး ၊ စိတျကရြောဂါနဲ့ သှေးတိုးရောဂါတို့ကွောငျ့ ခံတှငျးထဲမှာတံတှေးထှကျနညျးသှားတဲ့သူတှမှော အဖွဈမြားလရှေိ့တာကိုတှရေ့တယျဗြ ။
?စိုးရိမျစရာကောငျးတဲ့ကိစ်စမဟုတျပမေယျ့ သှားဖုံးရောငျရမျးခွငျးက နှလုံးသှေးကွောကဉျြးခွငျး ၊ လဖွေတျခွငျး ၊ ဆီးခြို ၊ အသကျရှူလမျးကွောငျးဆိုငျရာပွသနာ နဲ့ လမစပေဲ့ကလေးမှေးဖှားခွငျးတှနေဲ့ ဆပျစပျမှုရှိတယျလို့ဆိုပါတယျ ။
?သှားသနျ့ရှငျးရေး (scaling) ကို ultrasonic scaling device တှနေဲ့ပွုလုပျပေးပွီးကုသခြိနျအနနေဲ့လညျး အခြိနျအမြားကွီးမပေးရပါဘူး ။